तपाइँको Shopify स्टोर मा एक सहयोगी को रूप मा तपाइँको एजेन्सी कसरी जोड्ने | Martech Zone
तपाइँको एजेंसी लाई तपाइँको प्लेटफर्महरुमा तपाइँको लगइन प्रमाणपत्र कहिल्यै नदिनुहोस्। त्यहाँ टाढा धेरै धेरै चीजहरु छन् कि गलत हुन सक्छ जब तपाइँ यो गर्नुहुन्छ - हराएको पासवर्ड बाट जानकारी को लागी उनीहरु लाई हुनुहुन्न को लागी पहुँच गर्न को लागी। प्लेटफर्म को विशाल बहुमत आजकल तपाइँको प्लेटफर्म मा प्रयोगकर्ताहरु वा सहयोगीहरु लाई जोड्ने तरीका छ ताकि उनीहरु सीमित क्षमताहरु छन् र एक पटक सेवाहरु पूरा भए पछि हटाउन सकिन्छ।
Shopify यो राम्रो तरिकाले गर्दछ, यसको माध्यम बाट साझेदारहरु को लागी सहयोगी पहुँच। सहयोगीहरुको फाइदा यो हो कि उनीहरु तपाइँको Shopify स्टोर मा तपाइँको लाइसेन्स प्राप्त प्रयोगकर्ता गणना मा जोड्दैनन्, या त।
Shopify सहयोगी पहुँच सेट अप गर्नुहोस्
पूर्वनिर्धारित रूपमा, जो कोही तपाइँको Shopify साइट मा एक सहयोगी हुन पहुँच अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाइँको सेटिंग्स को जाँच गर्न को लागी छ।
नेभिगेट गर्नुहोस् सेटिङ.
नेभिगेट गर्नुहोस् प्रयोगकर्ता र अनुमतिहरू.
यहाँ तपाइँ एक पाउनुहुनेछ सहयोगीहरू खण्ड। पूर्वनिर्धारित सेटिंग यो हो कि जो कोहि एक सहयोगी अनुरोध पठाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाइँ सीमित गर्न चाहनुहुन्छ जो सहयोगी पहुँच अनुरोध, तपाइँ पनी एक विकल्प को रूप मा अनुरोध कोड सेट गर्न सक्नुहुन्छ।
यो सबै त्यहाँ छ! तपाइँको Shopify स्टोर तपाइँको एजेन्सी बाट सहयोगी अनुरोधहरु प्राप्त गर्न को लागी सेट गरीएको छ जो सामग्री, विषयवस्तु, लेआउट, उत्पादन जानकारी, वा यहाँ सम्म कि एकीकरण मा काम गरीरहेको हुन सक्छ।
तपाइँको एजेन्सी को रूप मा स्थापित गर्न को लागी आवश्यक छ Shopify पार्टनर र त्यसपछि उनीहरु तपाइँको अद्वितीय Shopify (आन्तरिक) स्टोर यूआरएल र उनीहरुलाई आवश्यक अनुमतिहरु को सबै प्रविष्ट गरेर सहयोगी पहुँच अनुरोध:
एक पटक तपाइँको एजेन्सी आफ्नो सहयोगी अनुरोध बाहिर पठाउँछ, तपाइँ एक ईमेल प्राप्त गर्नुहुनेछ जहाँ तपाइँ समीक्षा गर्न सक्नुहुन्छ र उनीहरुलाई अनुमति संग प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। एक पटक तपाइँ पसल पहुँच स्वीकृत, उनीहरु काम गर्न को लागी प्राप्त गर्न सक्छन्!
टैग: एजेन्सी पहुँचसहयोगीप्रमाणपत्रहरूशॉपिफाईShopify सहयोगीShopify साझेदारShopify साझेदारहरुShopify प्रयोगकर्ताShopify प्रयोगकर्ता अनुमतिहरुShopify प्रयोगकर्ताहरुप्रयोगकर्ता अनुमति